हेर्नुस नेपालकै अनौठो मन्दिर , बत्ती बालेर सन्तानको बरदान दिने, मन देखी मागेका सबै कुरा पुरा हुने विश्वास ! - Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /रोचक/हेर्नुस नेपालकै अनौठो मन्दिर , बत्ती बालेर सन्तानको बरदान दिने, मन देखी मागेका सबै कुरा पुरा हुने विश्वास !
लमजुङ जिल्लामा एउटा शिव मन्दिर छ । इशानेश्वर महादेव मन्दिर । उक्त ठाउँमा शिवरात्रीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ । सो मन्दिरलाई सन्तानेश्वर महादेव पनि भन्ने गरिन्छ । नेपालमा इशानेश्वर एक मात्र यस्तो मन्दिर हो जहाँ रातभरी उठेर ठाडाबत्ती बाल्यो भने सन्तान प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । मन्दिरका पुजारी गोविन्द सोतीले मन्दिरमा आएर बत्ती बाल्नेहरुले सन्तान प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
तर निकै लामो समय देखि मन्दिरमा ठाडा बत्ती बाल्ने प्रचलन रहेको भन्दै उनले अहिलेसम्म कति जनाले बत्ती बाले भन्ने तथ्यांक नभएको उल्लेख गरेका छन् । इशानेश्वर महादेव क्षेत्र विकास समितिले अहिले भने ठाडाबत्ती बालेर जन्मेका सन्तानको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको छ ।
यो पनि पढनुहोला – खेतमा भेटियो ३ वर्ष अगाडि हराएको चन्दननाथ मन्दिरको मूर्ति ! चम्कियो भाग्य
चन्दननाथ मन्दिरबाट हराएको दत्तात्रयको मूर्ति ३ वर्षपछि फेला परेको छ । २०७३ सालको मंसिर महिनामा मन्दिरबाटै हराएको दत्तात्रको मूर्ति खेतको डिलमा फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दूर्गा बञ्जाडेले जानकारी दिइन् । चन्दननाथ मन्दिरबाट ११ मंसिर २०७३ मा दत्तात्रेय भगवानसहित अरु स–सना गरी १४ वटा मूर्ति हराएका थिए ।
स्थानीयले मन्दिरबाट मूर्ति चोरी भएको जनाएका थिए । मन्दिरबाट हराएका मूर्तिको खोजीका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)सहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको टोली समेत परिचालन गरिएको थियो ।
तर, हराएको ३ वर्ष पछि चन्दननाथ नगरपालिका–१ दानसाँघुस्थित खेतमा मूर्ति फेला परेको हो । खेतको डिलमा मूर्ति भेटिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । मूर्ति फेला परेको सूचना पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली परिचालन भएको थियो । अहिले मूर्तिलाई प्रशासनमा ल्याएर सुरक्षित राखिएको प्रजिअ बञ्जाडेले जानकारी दिइन् । पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिए पछि मूर्तिलाई पुनः चन्दननाथ मन्दिरमा राखिने जनाइएको छ ।